Saynisyahanno Afrikaan ah ayaa bilaabay server-kooda horay loogu daabacay - AfricArXiv
Published by Segbedji on 25th Juun 2018 25th Juun 2018
Khadka bilaashka ah, khadka internetka waa mid ka mid ah tiro sii kordheysa oo ay aqoonyahannada qaaradda ku wadaagi karaan shaqadooda
[Waxaa asal ahaan lagu daabacay Tilmaanta Nature]
Koox u doodeysa sayniska furan waxay leeyihiin Waxay soo saartay kaydkii koowaad ee diyaarinta loogu talagalay khaasatan saynisyahano Afrikaan ah. AfrikArxiv aasaasayaasha Justin ayaa sheegaya in aasaasayaasha cilmiga Afrika iyaga oo ka caawinaya aqoonyahannada in ay si dhakhso leh ula wadaagaan shaqadooda Ahinon, kobciyaha websaydhka iyo arday dhigta tirakoobka codsiyada ee Dugsiga Qaranka ee Tirakoobka, Qorsheynta iyo Demograafiga ee Parakou, Benin, Galbeedka Afrika, iyo Jo Hasmann, oo ah tababare lataliyaha isgaarsiinta sayniska, Helitaanka 2 aragtida, oo xaruntiisu tahay Berlin, Germany.
Waxay rajeynayaan in server-ka diyaarinta ahi uu kordhin doono wadashaqeynta ka dhexeysa cilmi baarayaasha, isla markaana aqoonta u sahli doonta helitaanka siyaasad-dejiyeyaasha, ganacsatada, shaqaalaha caafimaadka, beeralleyda, suxufiyiinta, iyo daneeyayaasha kale.
Goobta waxaa lagu marti qaadi doonaa barnaamijka loo yaqaan 'Open Science Framework (OSF)', oo ah barnaamij bilaash ah, oo ah ilo furan oo u saamaxa cilmi-baarayaasha inay xiriiriyaan oo ay wadaagaan shaqadooda. Waxay taageeri doontaa diyaarinta waraaqaha, waraaqaha dib u dhigista, koodhka iyo macluumaadka, waxayna soo dhaweynaysaa soo gudbinta dhammaan luqadaha Afrika, oo ay ku jiraan Akan, Twi, Swahili iyo Xhosa.
AfricanArxiv waa tii ugu dambeysay ee dhowr meelood oo madal daabicis ah oo la furay ilaa bilowgii 2018. Bishii Maarso, Machadka Afrika ee Sayniska Xisaabaadka, iyo Elsevier ayaa ku dhawaaqay inay abuurayaan joornaal marin u furan Aqoonyahan Afrikan ah, iyo bishii Abriil, ayaa Akaademiga Akademiga Cilmiga Afrika (AAS) iyo F1000 la bilaabay Cilmi baarista Furan ee AAS, oo daabacda qoraallada qoraallada kuwaas oo maraya geedi socodka dib u eegista asaaga. AAS Open Research waxay daabacday 17 maqaal illaa markii ay nooshahay, iyadoo siddeed kale dib loo eegay.
Fikradda loogu talagalay AfricanArxiv waxaa ka dhashay tweets ay ka soo qaybgalayaashu ka soo qayb galeen shirkii sayniska ee furanaa ee Kumasi, Ghana bishii Abriil 2018. Kaliya saddex bilood ka dib, AfricanArxiv waxay leedahay boosteejo, bog Facebook ah, koonto Twitter, iyo koox ka kooban 12 saynisyahano ah, oo iyagu tabaruceen waqtigooda si kor loogu qaado adeegga, oo loo hubiyo in waxa la soo gudbiyay ay ku habboon yihiin.
Xawaaraha gaarsiinta badanaa waxaa sabab u ah fududeynta Xarunta Sayniska Furan ay u habeyn karto qalabkeeda OSF. AfricArxiv waa mid ka mid ah 21 adeegyadooda dib u siinta bulshada ee lagu dhisay OSF, oo ay ku jiraan Arabixiv, oo faafiya aqoonta Carabiga, iyo INA-Rxiv saynisyahano Indonesian ah.
Tan dambe waxay ka mid tahay keydkooda ugu shaqo wanaagsan, ayuu yiri Rusty Speidel, oo ah agaasimaha suuq-geynta ee COS .. Tan iyo markii la bilaabay Agoosto 2017, wuxuu aruuriyay 2,920 diyaarin.
Isbarbardhig ahaan, arkiviyada si wanaagsan loo aasaasay ee arXiv waxay heshaa 10,000 codsi bishii, iyo bioRxiv waxay gaaraysaa 1,000 soo gudbinta bil kasta, qiyaastii afar sano kadib abuuristeeda 2013.
Guusha AfrikaArxiv waxay ku xirnaan doontaa baaxadda iyo rabitaanka bulshada si ay ula wadaagaan shaqadooda midba midka kale iyo adduunka, ayuu yiri Speidel.
Bulshooyinka qaarkood waxay muujiyeen walaac bilow ah oo ku saabsan shaqadooda in la dardar geliyo, laakiin waxaa laga dhaadhiciyey faa iidooyinka helitaanka jawaab celinta asxaabtooda, ayuu yiri, gaar ahaan maadaama joornaalo badan ay bilaabeen inay ku dhiirigeliyaan cilmi-baarayaashu inay la wadaagaan qoraaladooda qoraaladooda. Preprints sidoo kale waxaa loo xilsaaray DOI rasmi ah, taas oo uu sheegay inay yareynayso halista in qof kale ku ammaano shaqadiisa.
- Qaybta ugu fudud ayaa ah kor u qaadista nidaamka. Qaybta adageed ayaa kobcaysa, taageeraya oo hore u sii waday, ayuu yidhi Speidel.
Gaaritaan iyo hawlgelin
Tolu Odumosu, oo ah tikniyoolajiyadda cilmiga sayniska iyo cilmi-baaraha bulshada ee Jaamacadda Virginia, ayaa sheegaysa in marin-u-helku uu meel muhiim ah ka yahay cilmi-baadhayaasha gobolka. In kasta oo diyaarintu ay qayb ahaan wax ka qaban karaan dhibaatada, carqalada kale ayaa waliba u baahan feejignaan, sida xaddiga rukhsadaha la mamnuucay ee joornaalada aasaasiga ah iyo khidmadaha daabacaadda. Hay'aduhu sidoo kale waxay u baahan yihiin inay waqti badan galiyaan, agab iyo meelo ay ku baartaan, ayuu yidhi Odumosu. Wuxuu jeclaan lahaa inuu shaqadiisa ku soo biiriyo AfricanArxiv hadii uu ogyahay inay gaari karto bulsho firfircoon oo saynisyahano ah oo ku nool qaaradda Afrika.
Welwel kale waa mid ka mid ah aqoonsiga. “Dadku wali waxay ku xayiran yihiin dunida saameynta,” ayuu yiri Nelson Torto, oo ah kiimikada falanqaynta iyo agaasinka fulinta ee AAS. Waqti ayay qaadanaysaa in dadku ka wareegaan waxa loogu yeero joornaalada saameynta sare leh loona wareejiyo goob ay ku wadaagi karaan asxaabtooda sida ugu dhakhsaha badan ee suurogalka ah. gaar ah.
Baarayaal badan oo gobolka ka shaqeeya, ayaa soo bixitaanno badan oo ka sii wanaagsan. Laakiin qaar ayaa ka walwalaya in saynisyahannadu ay ku jahwareeraan qoraallada joornaalada-dib loo eegay. Torto ayaa had iyo jeer ah mudnaanta ay leedahay in la wadaago macluumaadka. "Laakiin dadku waxay u baahan yihiin in ay ogaadaan nooca uu yahay macluumaadkaasi, iyo waxa ay u isticmaali karaan."
Ahinon iyo Havemann waxay rajaynayaan in qeexitaanno iyo tilmaamo qeexan ay meesha ka saarayaan wixii khaldan wixii khaldan.
Asluubta 26ka Juun 2018: Nelson Torto hadda xiriir kuma lahan Jaamacadda Botswana.
Tags: sayniska furandaabacaaddadaabacaadda